Jean Eric Rakotoarisoa : “Misy ireo mafy toto tsy manao fanambaram-pananana” -
AccueilRaharaham-pirenenaJean Eric Rakotoarisoa : “Misy ireo mafy toto tsy manao fanambaram-pananana”
Nambaran’ny filohan’ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana fa misy ireo olona izay voalazan’ny lalàna fa tokony hanatanteraka ny fanambaram-pananana, saingy minia tsy mahafantatra izany izy ireo, tamin’ ny teny somary mahery moa no nanambarany izany omaly nandritra ny fanateran’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta ny fanambaram-pananany. “Misy ireo mafy toto izay minia tsy nanao ny fanambaram-pananana’’. Manoloana ireo izay minia tsy manatanteraka izay voalazan’ny lalàna momba ny fanambaram-pananana moa dia nambaran’ny filohan’ny HCC fa misy ny sazy mikasika izany izay tokony hihatra, “misy ny fiaraha-miasa sy fifandraisana amin’ ny bianco manoloana ny fanambaram-pananana, ary misy izay fifampiresahana izay raha toa ka tsy maintsy hitsofohana ny sazy”. Manoloana izao zava-misy izao moa dia nanambara i Jean Eric Rakotoarisoa fa miandry ny fahatongavan’ny fanambaram-pananana izy ireo, ary indrindra ihany koa ho an’ireo mambran’ny governemanta notendrena farany teo, izay ao ny tokony hanavao, ary ao ireo izay vao hanao izay fanambaram-pananana izay. Hatreto aloha dia mbola tsy nilaza ny anaran’ ireo hoe mafy toto ireo ny filohan’ ny HCC, saingy raha izao no jerena dia andrasana ny fanatanterahan’ireo tompon’andraikitra ny asany amin’ny fampiharana ny lalàna. Ho an’ny filoham-pirenena kosa dia hiaraha-mahalala fa amin’ny fotoana hanatanterahany ny fanaterana ny antontan-taratasy firotsahany hofidiana no hanatanterahany ny fanambaram-pananana.
Mazava ny voalazan’ny lalàm-panorenana eo amin’ny andininy faha-41 fa ireo tompon’andraikitra ambony izay hanatanteraka ny asany dia tokony hanatanteraka fanambaram-pananana. “Alohan’ny hanatontosana ny asa na iraka sy hisahana ny andraikiny dia mametraka fanambaram-pananana manoloana ny Fitsarana Avo Momba ny Lalàm-panorenana ireo sokajin’olona voalazan’ny andalana etsy ambony”. Mazava noho izany ny andininy faha-40 izay mamaritra ireo izay takian’ny lalàna hanatanteraka fanambaram-pananana izany fa “ireto avy ny andrim-panjakana : ny Filohan’ny Repoblika sy ny Governemanta, ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona, ary ny ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana’’ io antony nanatanterahin’ ny praiminisitra ny andraikiny omaly tamin’ ny fanatanterahana ny fanambaram-pananana tetsy amin’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana. Nambaran’ny praiminisitra tamin’izany fa “ny fahavononana hanaja ny lalàm-panorenana no antony hanatanterahako izao fanambaram-pananana izao, sady fampisehoana fa hiady amin’ ny kolikoly isika, hiady amin’ny zavatra maro mambotry firenena’’ hoy ny praiminisitra lehiben’ny governemanta.